Dahalo 74 nanafika tany Beraketa : fatin’olona enina hita, hanao hetsika manokana ny zandary | NewsMada
Dahalo 74 nanafika tany Beraketa : fatin’olona enina hita, hanao hetsika manokana ny zandary
Nandravarava ny dahalo nahitana vehivavy roa tany Beraketa. Olona enina matin’izy ireo, ary omby aman’ondry anjatony lasany. Hanao hetsika hiadiana amin’ireo indray, hono, ny zandary.
Hanao hetsika manokana any Beraketa ny zandary avy any Betroka, Taolagnaro ary Bekily taorian’ny fanafihan-dahalo tany an-toerana, ny 26 febroary lasa teo, tamin’ny 10 ora alina. Dahalo 74 nanafika tany amin’ny tanànan’i Morarano, fokontany Ifarantsa Beraketa tamin’io fotoana io, izay voalazan’ny zandary fa vehivavy ny roa. Nandravarava mihitsy ireo dahalo tamin’izany. Omby miisa 37 sy ondry miisa 96 no lasan’ireo dahalo. Efa lasa ireo vao nanao ny fanarahan-dia ny fokonolona sy ny jama. Nifandona tao amin’ny toerana antsoina hoe Amborokafo Ambararata, kaominina Isoanala, ireo dahalo marobe sy ny fokonolona nampian’ny jama. Maty voatifitry ny dahalo ny olona telo sy jama telo tamin’ireto mpanara-dia. Nitohy ny fitsoahan’ireo dahalo vokatr’izany. Niantso vonjy tamin’ny “groupement” Anosy ireo mpanara-dia izay zandary dimy monja. Voalazan’ny zandary fa efa ny ampitson’ny fanafihana vao nisy nampandre ny zandary izay vao nanenjika.
Tonga tany amin’ny tanàna antsoina hoe Andriry Ifarantsa ny zandary sy ny fokonolona, saingy efa tsy tratra intsony ireo dahalo. Ny fatin’ireo olona enina no hita tao am-pahitr’omby novantanin’ireo mpanara-dia. Efa nentina any Beraketa ny razana rehetra.
Taorian’ity tranga ity, nanapa-kevitra fa hanao hetsika ny zandary any amin’ireo faritra telo ireo hiadiana amin’ny asan-dahalo mahazo vahana. Ity fanafihana tany Beraketa ity no anisan’ny goavana indrindra taorian’ilay niseho tany Ilakaka, ny fiandohan’ny volana febroary teo. Tamin’ity tranga ity, ilay nahafatesana dahalo efa 12, nentina tao Ilakaka avokoa ny razana tamin’izany. Tsy hetsika “Operation coup d’arrêt” intsony izany no misy fa ny anjaran’ny zandary manokana mihitsy ity hatao ity. Olana ny famatsiana ara-bola ireo mpitandro filaminana manao ity asa ity, ka izay manana anjara tandrify no mamita ny azy.